Sunday April 14, 2019 - 10:20:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay wareegta cusub oo lagu kordhinayo duqeymaha shacabka lagu gummaadayo ee ciidamadiisu ka geysanayaan dalka Soomaaliya.
Wareegtada kasoo baxday dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in khatarta xukuumadda Washington uga imaanaysa Al Shabaab ay tahay mid heerkeedu sarreeyo sidaas daraadeed ay ciidamada USA ay Al Shabaab kula dagaallamayaan gudaha Soomaaliya intaaysan sugan lahaayeen weerar uga yimaad sida ay daabacday shabakada CNN-ka.
Saraakiil katirsan wasaaradda Difaaca ayaa sheegay in duullaanka ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya uu sii socan doono muddo todobo sana ah lagana yaabo in howlgalkaas lasoo gaba gabeeyo marka lagaaro sanadda 2026.
Hoggaamiyaha islaam naceybka ku caanbaxay ee Aqalka cad Mareykanka ayaa sanad ka hor saxiixay wareegto amar kusiinaysa ciidamada AFRICOM in ay duqeymo aan kala sooc laheyn ka geystaan dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaannada shareecada islaamka lagu maamulo.
Mareykanka ayaa tobanaan qof shacab ah ku dilay duqeymo aan loo meel dayin sida ay warbixin caddeymo wadata ku xaqiijisay hay'adda Amnesty International, saraakiisha taliska AFRICOM ee mas'uulka ka ah duqeymaha laayaanka ah ee Soomaaliya ka socda ayaa sheegay in duqeymaha ay geysanayaan aysan wax weyn ka tarin khatartii Al Shabaab ee ku wajahneed ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka.
Duqeymo aan kala sooc laheyn oo ciidanka Mareykanka ay ka geysteen Soomaaliya sanadadii 2017,2018 iyo sanaddan 2019 ayaa sababay dhimashada tobanaan qof shacab Soomaaliyeed ah waxayna duqeymahaas beegsadaan isku imaatinnada shacabka, gaadiidka dadweynaha iyo dhul beereed.
Tan iyo markii uu Trump sare uqaaday duqeymaha xagga cirka ah ee ciidamadiisu ka wadaan Soomaaliya ayay Al Shabaab fulisay weeraro lagu dilay boqolaal Askari AMISOM wali waxay Shabaabku weerar ku hayaan maamullada taabacsan waxa loogu yeero Beesha caalamka ee Soomaaliya kajira.
Waxaa xusid mudan in Al Shabaab ay horraantii sanadkaan weerar caalami ah ka fulisay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya islamarkaana ay si joogta ah gudaha Kenya ugu beegsato ciidamada Booliska iyo shaqaalaha ajaanibta ah.